Castle Kumburk - PetrPikora.com
PetrPikora.com on August 3, 2019
Kumburk bụ mbibi nke nnukwu ụlọ ndị Goth, ihe dị ka 6 km n'ebe ọdịda anyanwụ nke Nová Paka. A na-achọta ya n'otu n'ime isi ihe atọ anyị chere na-akpọ Bohemian Paradise. Ọ dị na ebe dị elu nke 642 m asl n'ógbè district nke Semily, n'akụkụ ugwu nke otu aha ahụ. A na-echebe ozu ya dịka ihe ncheta ọdịbendị nke Czech Republic.
Emere ulo-elu a n’afọ 1325 site n’aka Markvart nke Vartemberk. Otu narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị, n'oge agha Hussite, onye nwe ya bụ Hynek Krušina nke Lichtenburg, onye bụ gọvanọ Oreb gosipụtara ya. Ikekwe ọ bụ ya wuru mgbidi ndị dị ná mpụga. Ndi mmadu n’otu n’ime ulo-elu a wuru nke oma n’elu ibe ha.
Mgbe agha Hussite gasịrị, Jindřich Berka nke Dubá nwetara ụlọ elu. Onye na-esochi ya bụ ndị ezinụlọ Trčka nke Lípa na ezinụlọ Smiřický buru ya. Na 16. Na narị afọ nke 19, a na-eji obí eze ụlọ mkpọrọ. N'oge afọ iri atọ ahụ, ndị Sweden bibiri ya. N'afọ 1658 bibiri iwu nke Emperor Leopold nke Mbụ.
N'ihi ọtụtụ akụkọ mgbe ochie mbibi ahụ, onye na-ede uri Karel Hynek Mácha gara. E nwere ncheta ncheta. Ka ọ dị ugbu a, ndị otu na-ahụ maka nchekwa nke Kumburk Castle na-achịkwa nnukwu ụlọ, nke lekọtara anya wee wuo ụlọ nche ma na-ahazikwa ihe omume ọdịnala dị iche iche nwere ebumnuche ọrụ ebere (maka ego a na-emezigharị ụlọ).
Hizọ warara na-acha odo odo na-acha odo odo na-eduga na mkpọmkpọ ebe, na-amalite na nkwụsị ụgbọ okporo ígwè Syřenov na tụọ 3 km. Markedzọ akara akara uhie na-agafe ụzọ a na 0,5 km n'okpuru mkpọmkpọ ebe. Ọ na-eduga ọdịda anyanwụ ruo Klepanda nke dị na ndịda mpụga obodo Syřenov (kilomita 2 km), ọwụwa anyanwụ ọ na-aga n'ihu na okporo ụzọ Skalka pod Kumburkem dị nso na Brdo (1 km) ma gafere na Nová Paka (5 km).
Lọ elu ahụ leghaara anya na Bohemian Paradise na ugwu. Obere kilomita ole na ole ọdịda anyanwụ nke Kumburk Castle bụ mbibi ọzọ nke Bradlec. N'adịghị ka Bradlec, Kumburk chebere akụkụ buru ibu nke ihe ndị e wuru, karịsịa akụkụ ala nke obí eze na akụkụ nke ụlọ elu na mgbidi.
Nnukwu ụlọ a ga-enweta ya n'enweghị ihe mgbochi, ngwụsị ngwụsị izu wee bido ya. Associationlọ ọrụ ahụ na-ahazi ihe omume mere eme na nnukwu ụlọ ọtụtụ ugboro n'afọ.
Nnukwu Nkịtị Rochie
Oge izu 4 gara aga
Ọnwa 1 gara aga
Nkịtị Kestrel Kost